Heathrow dia nanery ny mpitondra eran-tany hanaiky ny solosaina maharitra maharitra manerantany ao amin'ny G7 | Vaovao Aviation
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny dia any Eropa • Raharaham-panjakana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Teknolojia fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao any UK
CEO John Heathrow John Holland-Kaye
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » Heathrow dia nanery ny mpitondra eran-tany hanaiky ny solosaina maharitra maharitra manerantany ao amin'ny G7
Nandritra ny fotoam-pivoriana G7 nokarakaraina tao Cornwall ny zoma nataon'ny Royal Highness The Prince of Wales, ny CEO CEO Heathrow John Holland-Kaye dia nanery ny mpitarika ny G7 mba hanaiky ny fihaonambem-pireneny izay mampitombo ny SAF 10% amin'ny 2030, mitombo hatrany amin'ny 50 farafaharatsiny % hatramin'ny 2050, ary koa ny karazana rafitra mandrisika ny vidiny izay nampiasaina hanohanana ny tinady sy hanomboka ireo sehatra karbaona ambany hafa.
SAF dia haitao voaporofo, nampiasaina hatramin'ny WWII hanidina mpiady rehefa tsy ampy ny solika, ary miasa amin'ny fiaramanidina efa misy
SAF dia vahaolana mety hiasa manerana an'izao tontolo izao, saingy mila ampitomboina amin'ny fomba lehibe izy io
Ny G7 dia afaka mandray andraikitra manerantany amin'ny alàlan'ny fanolorantena am-pahefana amin'ny SAF 10% farafaharatsiny amin'ny 2030, mitombo hatrany amin'ny 50% farafaharatsiny amin'ny 2050
Ny mpitarika ny toekarena lehibe indrindra manerantany dia namporisihina hampihena ny fandefasana fiaramanidina amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena amin'ny mandat amin'ny fampiasana solika maharitra (SAF). Nandritra ny fivoriana G7 natao tao Cornwall ny zoma nataon'ny Royal Highness The Prince of Wales, Heathrow Ny tale jeneraly John Holland-Kaye dia nanery ny mpitarika ny G7 hanaiky ny fihaonamben'ny kaomisaria izay miakatra hatrany amin'ny 10% SAF hatramin'ny 2030, mitombo hatrany amin'ny 50% farafaharatsiny amin'ny 2050, ary koa ireo karazana rafitra mandrisika ny vidiny izay nampiasaina hanohanana mitaky sehatry ny karbaona ambany hafa ny fangatahana sy ny sipa.
Hery lehibe ho an'ny tsara ny sidina. Tombony ho an'ny fiaraha-monina ny fampifandraisana ny olona sy ny kolontsaina ary ny fampandehanana ny varotra manerana ny firenena. Tsy maintsy esorintsika amin'ny alàlan'ny sidina ny karbaona mba hahafahantsika miaro ireo tombontsoa ireo amin'ny tontolon'ny zero. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe any amin'ny fanjakana G7 rehetra ary mitombo isa erak'izao tontolo izao dia nanolo-tena hiditra amin'ny zero hatramin'ny 2050. Tsy misy afa-tsy io tanjona io ihany no azontsika atao amin'ny alàlan'ny fampiakarana haingana ny solika maharitra.
SAF dia haitao voaporofo, nampiasaina hatramin'ny WWII hanidina mpiady raha tsy ampy ny solika, ary miasa amin'ny fiaramanidina efa misy. Efa nampandeha sidina 250,000 eran'izao tontolo izao izy io. Ny SAF dia mety ho biofuel mandroso vita amin'ny fako avy amin'ny fambolena, ala anaty ala ary indostria na solika syntetika vita amin'ny alàlan'ny karbaona nalaina avy tamin'ny rivotra sy angovo madio, samy mitahiry tahiry karbonina 70% na mihoatra. Vao tamin'ity herinandro ity dia nahazo ny fandefasana SAF voalohany i Heathrow ary nampiditra azy tao amin'ny rafitry ny famatsiana solika lehibe hanehoana ny porofon'ny foto-kevitra ao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe.
SAF dia vahaolana mety hiasa manerana an'izao tontolo izao, saingy mila ampitomboina amin'ny fomba lehibe izy io. Ny G7 dia afaka mandray andraikitra manerantany amin'ny alàlan'ny fanolorantena am-pahefana amin'ny SAF 10% farafaharatsiny amin'ny taona 2030, mitombo hatrany amin'ny 50% farafaharatsiny amin'ny 2050. Miaraka amin'ny famporisihana vidiny mety, miorina mandritra ny 5 - 10 taona (toy ny Contracts for Difference izay nahomby tokoa tamin'ny fampitomboana ny angovo avy any ivelany izay tany Angletera), izay handefa ny mari-pamantarana tsena mety hamaha ny fampiasam-bola amin'ireo zavamaniry SAF. Izany dia hamorona asa vaovao amin'ny indostria maitso ao amin'ny G7.
“Miombon-kevitra isika rehetra fa ny fampijanonana ny fiovan'ny toetrandro no fanamby lehibe atrehin'ny planetantsika. Ny G7 dia efa naneho ny fahaiza-mitarika tamin'ny fanekena ny hetra ara-barotra faran'izay kely indrindra manerantany, ary raha afaka miditra amin'izany toe-tsaina iraisana izany isika hiara-hiombon-kevitra amin'ny mandanjalanja farafaharatsiny 10% ny solika maharitra amin'ny 2030 sy ny famporisihana vidiny sahaza hampiasana azy, hiantoka ny tombotsoan'ny sidina isika raha tsy misy vidin'ny karbaona. Hery lehibe ho an'ny tsara ny sidina ary tsy afaka miandry olon-kafa hamaha ity olana ity amin'ny fotoana ho avy isika - manana fitaovana hanaovana izany isika anio, eto ny fanahim-piraisana ary miangavy ny mpitondra G7 aho mba handray andraikitra mivaingana izao. ”
Heathrow no lohalaharana tamin'ny fanentanana sy ny fiovana amin'ny fampihenana ny gazy karbonika amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, ny sehatry ny seranam-piaramanidina UK dia nanjary ny sehatry ny fiaramanidina nasionaly voalohany eran-tany nanolo-tena hanana net zero tamin'ny 2050, ary i Heathrow dia manana andraikitra lehibe. Ankoatry ny fampidirana vao haingana ny fandefasana voalohany ny SAF ao anaty rafitry ny famatsiana solika, ny fotodrafitrasa rehetra ao amin'ny seranam-piaramanidina dia mandeha amin'ny herinaratra azo havaozina 100%, miaraka amina drafitra hanalavirana ny fanafanana gazy eny amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny tapaky ny taona 2030, lasa lasa aotra karbonina tanteraka .
Heathrow koa dia namerina tamin'ny laoniny tany 95 hektara an'ny UK izay mamoaka karbaona ary manomboka miasa ho toy ny fitrandrahana karbaona. Ny talen'ny paikadin'ny Carbon Heathrow, Matthew Gorman, dia nitarika ny ekipan'ny karbôna sy maharitra maharitra nandritry ny folo taona lasa ary nitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny tanjontsika sy ny drafitra. Izy dia nekena noho ny serivisy ho an'ny Decarbonisation of Aviation miaraka amin'ny MBE ao amin'ny lisitry ny fanomezam-boninahitra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Heathrow dia toerana tsara kokoa noho ny fandraisany anjara. Raha io mari-boninahitra io dia marika manamarika ny fandrosoana vitan'i Heathrow iray manontolo, ny dia hiantohana ny tombotsoan'ny fiaramanidina ho azo antoka amin'ny ho avy tsy misy ny vidin'ny karbaona dia maharitra ary mitohy ny asantsika sy ny fahavononantsika.